Qaab dhismeedka birta, biriijka birta ah, darbiga daahyada birta - Honghua
Kiisaska Wax Soo Saarka & Mashruuca
Buundada Birta ah
Darbiga daahyada birta ah
Qaybaha Qaab-dhismeedka Birta
Aqoonta & Maamuusta
Imtixaanadayada hadda hel!
Guangdong Honghua Construction Co., Ltd. (hadda kadib loogu yeero Honghua) waa shirkad dhisme oo ka tirsan Guangdong Huayu Structure St Co. Awoodda wax soo saar sanadle ah ee shirkaddu waxay gaari kartaa 0.15 milyan oo tan. Shirkaddu waxay leedahay aqoonsi soo saaraha qaab-dhismeedka birta heerka koowaad ah waana saldhigyada muhiimka ah ee been abuurka ah ee Koonfurta Shiinaha. Shirkaddu waxay diiradda saareysaa ka baaraandegidda cilmi-baarista tikniyoolajiyadda noocyada kala duwan ee qaab-dhismeedka birta cilmi-baarista tikniyoolajiyadda iyo horumarinta waana shirkad hoggaamineysa warshadan. Maaddaama ay tahay unug dhisme hoosaad ka ah Kooxda, Honghua waxay leedahay aqoonsi qandaraasle Qaab-dhismeed Qaab-dhismeed Qaab-dhismeed heer-koowaad ah, Qaab-dhismeedka Qaab-dhismeedka Qaab-dhismeedka heerka labaad, Qandaraasle Qaab-dhismeedka daah-daah daah-furan ah, Mashruuca heerka koowaad ee Qurxinta Qandaraaslaha Xirfadlaha, Heerka Koowaad Mashruuca Ilaalinta Deegaanka Qandaraaslaha, Qandaraaslaha Mashruuca Aasaaska-fasalka koowaad, Guriyeynta heerka labaad iyo Qandaraaslaha Guud, Qandaraaslaha Mashruuca degmada heer labaad ah, adeegyada shaqaalaha, iwm.
Fiiri inbadan Alaabtayada
Alaabooyinka dib loo eegay
Haysashada shahaadada heerka koowaad ee soo saarista qaab-dhismeedka birta ee Shiinaha.
Dhismaha ganacsiga birta sare u kaca
Guri sare oo bir ah
Qaab dhismeedka birta ah ee tareenka horay loo sii diyaariyay
Qaab dhismeedka hoolka Sport
Jaranjarooyinka wareega ee birta ah
Qaab dhismeedka birta ah ee hoyga dabaqyada badan leh
Bakhaarka qaabdhismeedka birta ah
Bakhaarka qaabdhismeedka birta guud ahaan waxaa lagu sameeyaa taxane ah qaab-dhismeed bir ah, oo ay ku jiraan tiirarka birta, biraha birta, purlin iyo wixii la mid ah. Qaybahan waaweyn ayaa ka kooban qaab dhismeedka rarka xamuulka ee bakhaarka. Sababtoo ah miisaanka fudud iyo dhismaha fudud, waxaa jira baahi weyn oo loo qabo bakhaarka birta qaabdhismeedka ah. Birta strucutre sidoo kale waa tan ugu ...
Lafaha birta ah ee dhismayaasha dabaqyada badan ee She ... 2020-04-01
Lafta birta ah ee dhismaha qaabdhismeedka birta ah (No.7) ee Shenzhen Airlines Headquarter-Guangdong Honghua Construction Co., Ltd, ama Honghua, ayaa mas'uul ka ah soo saarista iyo rakibidda. Thanks Shenzhen Airlines iyo Hunan Construction markale. Dhisme hal dabaq ah waa bui ...
Guntin sanduuqa steel ee lugaynaya waddo b ... 2020-04-01
Bishii la soo dhaafay shirkadeennu waxay qabaneysaa mashruuc buundo bir ah oo ay ka qaadatay shirkadda dhismaha ee dowladdu leedahay Kadib daraasiin maalmood oo halgan ah, guntinta sanduuqa birta ee buundada weyn ayaa la dhammeeyey. Mashruucu wuxuu ku yaalaa Magaalada Zhaoqing, ee gobolka Guangdong. Dhererka rakaabkan lug-b ...
Waa maxay meertada birta birta ah?
Wareegyada xariirka Fureyaasha xariirka guud ahaan waa qaab-dhismeedyo hooseeya, oo ka kooban tiirar iyo jiingado siman ama jiingad leh, oo ku xiran daqiiqad-iska caabin ...
Sidee loo dhisay dhismayaal bir ah?
Mashiinka biraha waa farsamo dhismeed leh "qaab dhismeedka qalfoofka" ee tiirarka birta ah ee toosan iyo I-beamsada jiifka ah, oo lagu dhisay shabag afar geesle ah ...
Waa maxay sababta loo isticmaalo qaabdhismeedka birta?
Sababtoo ah qaabdhismeedka birtu wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan. Marka hore, xoog sare. Isugeynta sare ee xoogga culeyska (xoogga halkii miisaan). Marka labaad ...
Huanan Idustrial Park, Liaobu Town, Dongguan City, Gobolka Guangdong, Shiinaha 523405